Iikawusi ezenzelwe wena | Iikawusi eziyilwe ngokweSiko｜Uyilo lweekawusi zokuma enye-i-Ubuy
Indlela yokuodola iikawusi zesiko
Akuyona imboni enzima ukuba abavelisi bavelise iisokisi ngokuqulunqwa kweesokisi zakho, nangona kubandakanya iinkqubo ezininzi zokugqiba ukuveliswa kweesokisi zonke. Njengomzobo woyilo lwesokisi, ukukhetha umsonto wesokisi, ukunitha iikawusi, ukuprintwa kwe-sublimation, i-embroidery, uxhulumaniso lweenzwane, ukwenza, ukuhlolwa komgangatho, ukupakishwa, ukuthutha, ukungenisa, ukuthumela ngaphandle, intlawulo, njl.
I-Ubuy ibonelela ngoyilo lweekawusi zokuma kunye neenkonzo zokuvelisa kwabo bafuna iikawusi eziyilwe ngokwesiko. Konke okufuneka ukwenze kukuthumela uyilo lwakho okanye uchaze iimfuno zakho, kwaye uhlawule, siya kugqiba wonke umsebenzi oseleyo njengomenzi weekawusi zobungcali.
Ukwenziwa kweekawusi zesiko kunokuba lula njengala manyathelo asi-7 alandelayo:
1. Shiya umyalezo wakho kuthi
Ungashiya igama lakho, inombolo yefowuni, i-imeyile yoqhagamshelwano, igama lenkampani, kunye nemibuzo kunye neemfuno zakho, siya kukuphendula kwiiyure ezingama-24.
2. Uyilo lweekawusi
Thumela ngaphezulu koyilo lweekawusi zakho kwaye uqinisekise iinkcukacha zoyilo lwakho, njengokwakheka, ubungakanani, ubukhulu, isitayile, njl.
1) Thumela iisokisi zakho ezigqityiweyo zoyilo kwifomathi ye-AI ukuba kunokwenzeka okanye ungakhetha naluphi na uyilo oluthandayo kwiphepha lethu lemveliso.
I-2) Ukubunjwa okungagqibekanga kweesokisi zethu yi-80% yekotoni, i-nylon ye-17% kunye ne-3% ye-spandex, nayiphi na enye into ehlala ikhona.
3) Sinokwenza isayizi enye ilingane kakhulu kwaye sinokwenza naziphi na ezinye iisayizi ukuba usixelela ubungakanani besayizi oyifunayo.
3. Fumana iiSampulu zeekawusi
Iikawusi zesampuli ziya kwenziwa phakathi kweentsuku ezi-7-10 kwaye zithunyelwe kuwe ukuze zivunywe ngaphambi kokuveliswa kobuninzi.
Malunga neesokisi zeesampulu, sinokwenza iisampulu zamahhala ukuba ubeka i-odolo ye-bulk ngaphandle koko kufuneka sikuhlawule ngesampuli kodwa siya kubuyisela umrhumo wesampuli kuwe xa ubeka umyalelo omkhulu.
Nokuba yeyiphi na indlela, siya kwenza iisampulu ezisekelwe kuyilo lwakho kwaye sizithumele kuwe ukuze ufumane imvume yemveliso eninzi. Kwaye siya kuhlala siyiguqula isampuli de waneliseke yiyo.
4. Hlawula Idipozithi ethile
Hlawula i-30% yediphozithi kwangaphambili phambi kwemveliso eninzi.
Ukuqinisekisa ukuba imveliso yeekawusi ezininzi inokuhamba rhoqo, kufuneka sihlawule abathengi bethu idiphozithi ngaphambi kokuveliswa.
Kwii-odolo ezincinci, kufuneka sihlawule i-100% yediphozithi kunye ne-30% yediphozithi yee-odolo ezinkulu.
5. Imveliso emininzi
Ukuveliswa kobuninzi kuphela kunokuqaliswa emva kweesampuli ezivunyiweyo ekupheleni kwakho. Ixesha lethu lokuvelisa ngobuninzi malunga neentsuku ze-35-45 emva kweesampuli ezivunyiweyo.
6. Hlawula ibhalansi
Ibhalansi kufuneka ihlawulwe emva kwemveliso eninzi kwaye phambi kokuba ithunyelwe ngaphandle.
Ukuza kuthi ga ngoku, wonke umsebenzi wemveliso ugqityiwe kulo mjikelo wokuvelisa iikawusi kwaye iikawusi zakho zilungele ukuthunyelwa.
7. Ukuhanjiswa kwehlabathi
Iikawusi ziya kuthunyelwa ngokukhawuleza emva kokuba uhlawule imali eseleyo.
I-1) ukuthunyelwa ngenqanawa elwandle: Ukuhanjiswa kolwandle yeyona ndlela inexabiso eliphantsi kodwa ikwayeyona ndlela icothayo yokuhanjiswa kwelizwe jikelele, lolona khetho lulungileyo lweodolo enkulu.
I-2) Ukuhanjiswa koololiwe: Ukuhanjiswa kukaloliwe kuncinci kwaye akukho mboniso, kodwa kufanelekile kumazwe aliqela athumela ngenqanawa evela eTshayina.
I-3) Ukuthunyelwa kwe-Air: Ukuthunyelwa kwe-air yeyona ndlela ikhawulezayo kwaye ibiza kakhulu, le lolona khetho lungcono kwiisampuli kunye nee-odolo ezincinci kuphela.